Miisa 151 tamin’ireo fitorohana sy fitoriana voarain’ny Bianco izany. Ao anatin’ny 05 voalohany koa ny fitsinjaram-pahefana misy ny kaominina sy ny sehatry ny fananan-tany ary ny resaka fampianarana. Nidina kosa saingy mbola ao anatin’ny laharana 10 voalohany ny mpitandro ny
filaminana, ka eo amin’ny laharana faha-06 ny zandary raha laharana faha-07 ny polisy ary any amin’ny laharana faha-09 ny fandraharahana ny fonja. An-kilan’izany, tamin’ireo
fitorohana sy fitoriana miisa 865 voarain’ny Bianco Toamasina, dia ny antontan-taratasy 129 ihany no azo nanaovana fanadihadiana ara-kolikoly tao anatiny. Antontan-taratasy niisa 54
noho izany no nahavitana fanadihadiana izay efa nalefa teny amin’ireo sampam-pitsarana misahana ny raharaha dia ny PAC Antananarivo izay nandefasana antontan-taratasy miisa 06,
sy ny fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina nandefasana ny antontan-taratasy miisa 20, ary ny ambiny rehetra dia teo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany misy eto Toamasina, Ambatondrazaka, Moramanga, Vatomandry, Maroantsetra, Fenoarivo Atsinanana sy ny fitsarana ambony Toamasina. Ankoatra izany dia niisa 210 ny olona nohenjehina tao anatin’ireo antontan-taratasy ireo, ka ny 82 nahazo ny didy fampisamborana, 19 nofonjaina vonjimaika raha 63 no nahazo fahafahana sy fanaraha-maso ara-pitsarana.
Raha ny teo amin’ny fanambaram-pananana izay tsy maintsy ataon’ireo mpiasam-panjakana ambony sy ireo olom-boafidy ary ireo misahatra amin’ny asa ambaran’ny lalana tsy maintsy manao izany, dia nambaran’ny Bianco tamin’ny tatitra nataony fa tsy mbola nahavita ny azy na mahafantatra aza ny tokony hanaovany izany ireo OPJ eo anivon’ny talem-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, ireo kaomisera ny sehatr’asam-panjakana toy ny eo enivon’ny talem-paritry ny varotra, lehiben’ny mpampiofana eo anivon’ny tafika Malagasy ary ireo inspektera eo anivon’ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany. Efa
nampahalalain’ny Bianco izy ireo ka aorian’izay raha tsy manao izany dia hivoaka ny fanenjehana sy ny sazy, hoy ny Bianco tamin’ny tatitra nataony.